Iphrojekthi yeTalente Esekelwa Inethiwekhi ye-ASELSAN esetshenziswe ku-NATO Exercise | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraInethiwekhi ye-ASELSAN's Network Support Talent Project esetshenziswe ku-NATO Exercise
22 / 05 / 2020 I-06 Ankara, Isifunda sase-Central Anatolia, JIKELELE, HEADLINE, YOKUZIVIKELA, TURKEY
iphrojekthi yethalente exhaswe yinethiwekhi yase-Aselsan yayisetshenziswa kumkhuba weNATO
Iphrojekthi ye-'Thalente Elasekelwa iThalente 'yathuthukiswa yi-ASELSAN ifakazele ikati layo kusuka ku-NATO's EURASIAN STAR'19 drill.
I-EURASIAN STAR (EAST) 2019 Exercise yenziwe ngokubamba iqhaza kwabasebenzi abangama-3 abavela endlunkulu eziyishumi nesishiyagalolunye, ezikhungweni zezwe kanye nasezinhlanganweni zamazwe e-Istanbul, kanye neNATO Command and Force Stosition.
Emsetshenzisweni we-EAST-2019, isoftware ye-Over Battalion Command and Control System (TÜKKS / TACCIS), esetshenziswayo ngaphakathi kwenqubo yephrojekthi ye-Network assisted Ability (ADY), isetshenziswe ngempumelelo ekwakheni isimo esinobuhlakani nokukhombisa isimo samanje kulo lonke uhlelo lokuzivocavoca.
Ku-3rd Corps Command, okuyindlunkulu yamazwe amaningi, isoftware ye-TACKKS / TACCIS ngesiNgisi, ngamamephu wesimo abekelwe amazinga we-NATO, izindawo ezisebenzayo kumamephu ezinombolo ezithathwe kumaseva we-NATO Map, wokushintshwa kwemicimbi nezinyathelo zokulawula. imisebenzi efana nokulandela ngomkhondo, inobungani futhi iyisitha Combat Arrangements (MIT) kanye nokudlulisa isimo samanje ohlelweni lweNATO Common Operating Picture (NCOP).
Ngokwesilinganiso sephrojekthi ye-ADY, izifundo ze-EAST-2019 zaqala ngoSepthemba 30, 2019 ngokufakwa kwesoftware ye-TÜKKS / TACCIS. Kwesekelwa kakhulu ukwesekelwa kwabasebenzi ukuze kufakwe, kufundiswe abaqeqeshi nokuqeqeshwa kwabasebenzisi, ukufakwa kwedatha ngaphambi kokuzivocavoca nokwenza umsebenzi. Okwamanje, kuthathwe impendulo evela kubaqeqeshi, abafakizicelo nabasebenzi bese kwenziwa umsebenzi odingekile ukuze kuqedwe ngempumelelo lo msebenzi.
Ukuzivocavoca kwe-EAST-2019 kwaqedwa ngempumelelo okokuqala nge-software ye-TÜKKS / TACCIS ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zeButho Lezempi laseTurkey kuqala, izinyanga eziyishumi ngaphambi kokulethwa kwephrojekthi ye-ADY.
Elinye igxathu enqubweni yokuthatha umthwalo we-NATO 2021 (NRF21), elibalulekile ezweni lethu, laqedwa ngokwenza umsebenzi we-EAST-2019.
Inqubo Yesitifiketi se-NATO
STEADFAST COBALT 2020 (STC2020) kwinqubo yokuqinisekiswa kwe-NATO ngoMashi-Meyi 020, CWIX-2020 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) kanye ne-STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 ngoNovemba-Disemba 2020 I-JA2020) izoqhubeka nokushayela.
Njengomphumela wempumelelo etholwe kulo msebenzi, kuphinde kwachazwa ukuthi abasebenzi be-ADY Project kanye nabalingani bezisombululo ezivela ezinkampanini ezahlukahlukene bahlangana emcimbini wokugubha obanjelwe enkampini yase-İvedik Technopark ngokubamba iqhaza koMongameli woMkhakha we-Defence System Technologies (SST) neMenenja Jikelele Jikelele uMustafa Kaval kanye nabaphathi.
Inethiwekhi Esetshenziswayo Yekhono Lokusebenzisana le-MIP
Ngokwesibalo samaphrojekthi enzelwe i-Land Forces Command, izingqalasizinda ze-IT zenziwe eminyakeni engu-15 edlule ngokuya ngamazinga we-NATO kanti nokugcinwa kwawo kuhlinzekwe nguHavelsan.
Ukwenziwa kabusha kwale ngqalasizinda kanye nokusebenzisa kwayo ithalente elisekelwa inethiwekhi kufakiwe kuphrojekthi ye-Network assisted Talent (ADY). Ngokwesibalo se-Network Supported Ability (ADY) MIP Compliance Project, iHavelsan izoqhubeka nokwenza imisebenzi ekwakhiweni nasekuqalisweni kwengqalasizinda yokuhlanganiswa yoMthetho Wezomhlaba owenziwe ngonyaka we-2001 kuya ku-2012, kanye nokusebenzisana kwezinhlelo zolwazi ze-Land Forces Command ezindaweni zikazwelonke nezamazwe jikelele. (Umthombo: DefenceTurk)
Uhlelo lwe-EU-Supported Tram lweCyprus
Umsebenzi wezokuthutha nokusekelwa osebenza nge-helicopter uqaliswe ku-Alanya Cable Car Construction
Imiklamo yezokuthutha ezisekelwa yi-EU izoboniswa eSiteshini SokuThutha Sase-Sirkeci
Ukwakhiwa Kokudluliswa Kwepayipi leNato (BHRS III, Phase (East Line)…
Ukufakwa kwe-ropeway okusizwa nge-helicopter kuqale e-Uludağ (Isithombe segalari)
3. Metro kuya esikhumulweni sezindiza ne-3. isitimela esiphezulu esisizwa ngebhuloho
Umthetho omusha ovela e-UKOME Ukusekela Ukukhiqizwa Kwangaphakathi Kwezentengiselwano ZaseKhaya Zomsebenzi
I-Eurasia Crossing Project Impumelelo yomhlaba wonke yobunjiniyela obangela ukuthutha
Ukuxoshwa kwe-chairlift ku-Mountain Yıldız
Ukuqeqeshwa Komlilo Nokuzivocavoca Umzimba Çankırı Scissor Factory
I-NATO Pipe Intersecting ngeBursaray Light Rail System Stage 3 (East Line) Umzila…
Istanbul 5 izokweqa inkathi eminyakeni
I-Sanliurfa Yonyaka owedlule we-4 Ubuyela Ezokuthutha
Uhlelo lwe-Nevşehir High-Speed ​​Train Project
Project Samson Railway Project Çağ Atlatır
I-Deray Exercise yayibanjwe e-Akçaray
Hacı Ayvaz Industrial Products Inc. I-InnoTrans ku-2016
I-TCDD 3. Ukuqeqeshwa Komlilo Ukuzivocavoca Okugcinwe Esifundeni
Isikhathi esisha siqala kwezokuhamba eBursa RayHaber Sasilapho (I…
Ukuqubuka komhlaba kuTÜVASAŞ
I-SAMULAŞ ihoxise ukuzivocavoca
Ukuzivocavoca komlilo kuqediwe (Isithombe segalari)